TELENOR ZERO FACEBOOK AND SERVICES ( Version 2.0) - အောင်အောင်ဆွေ Blog
Telenor ၏ Service များဖြစ်သည့် .. အင်တာနက် Package ၀ယ်ယူခြင်း ... ငွေလက်ကျန်စစ်ခြင်း .. Prepaid Data Plan ၏ ကျန်ရှိနေသော Data ပမာဏ ကို စစ်ဆေးခြင်း .. တို့ ကိုလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အပြင် ။
Telenor ၏ Free Service များဖြစ်သည် . . Zero FaceBook အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့် Balance ကိုချွေတာနိုင်ပြီဖြစ်သလို .. Wiki ကိုလဲ .. Data ကြေး Free ဖြင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကာ .. Knowledge အသစ်များရှာဖွေနိုင်ပါသည် ။ သတင်းများဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် ။ Myanmar Wiki ကိုလဲ အလွယ်တကူ အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။
Play Store မှ ဒေါင်းရန် -
Play Store ရှိသူများ Play Store မှဒေါင်းပါ။ ___________________________________
Play Store မှ ဒေါင်းလို့ မရပါက Myanmar App Store မှဒေါင်းပါ။ Myanmar App Store တွင် Mediafire Link , Pcloud Link and DropBox Link များဖြင့် အဆင်ပြေစွာ ဒေါင်းလို့ရအောင်တင်ပေးထားပါသည်။ http://downloadmyanmarappstore.com/?p=408